Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Nepal » Miyaad tagtay goobta uu ku dhashay Sayidka Buddha?
Wararka Nepal • News • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Nepal waa meesha uu ku dhashay Lord Buddha.
Macbadka Maya Devi ee Lumbini ayaa mar kale soo dhaweyn doona martida mar haddii hanjabaadda COVID-19 ay ka dambeyso.
eTurboNews taxanaheena socda ee ah tilmaamaha socdaalku wuxuu dunida xusuusinayaa fursadaha dalxiiska ee dhowaan soo laaban doona.
Nepal waxay caan ku tahay fuulitaanka buuraha iyo socod -socodka laakiin qofka socotada ah ee aadka u xiisaha badan waxaa jira qurux badan, duur -joog iyo baraarug ruuxi ah oo ku sugaya. Lumbini waa tusaalaha ugu muhiimsan ee tan.
Laakiin ka digtoonow, meeshani waa goob aad ruuxi ahaan u awood badan in boqor weyn oo dagaal ka tanaasulay oo qaatay nolol nabad ah; Lumbini wuxuu awood u leeyahay inuu wax ka beddelo.
Lumbini waa goobtii Dhaxalka Adduunka ee UNESCO. Waxaa jira tamar ama aura Lumbini oo aan la garan karin.
Emperor Ashoka wuxuu dhistay waxa loo malaynayo inuu yahay kii ugu horreeyay ee dhowr ah “Ashoka Tiirarka” halka uu ku dhashay Buddha. Xukunka Ashoka (ca 304-233 BC) waa mid cajiib ah xaqiiqda ah in Boqorkan mar aad u dagaalsanaa ee Boqortooyadii Mauryan uu si lama filaan ah ugu beddelay Budhiism, ka tanaasulay dagaal, oo u hibeeyay sannadihii ugu dambeeyay noloshiisa barashada nabadda iyo jidadka Budhha.
Macbadka Maya Devi ee Lumbini wali waa mawduuca qodista iyo cilmi -baarayaasha qadiimiga ah waxay sii wadaan inay daah -fur cusub oo muhiim ah ka sameeyaan goobta. Waxaa ku xiga goobta macbudka ee hadda jirta, tiirarka caanka ah ee Ashoka Pillar wuxuu la taagan yahay qoraal tilmaamaya meeshan inuu yahay meeshii uu ka dhashay Budhha.
Sanadkii 2014 ayaa lagu dhawaaqay, Nepal waxay qorsheyneysaa inay horumariso Lumbini, oo muddo dheer loo aqoonsaday inay tahay meesha uu ku dhashay Sayidka Buddha, oo ah Magaalada Nabadda Adduunka.
Dad badan ayaa ku doodaya in kasta oo ay jiraan isku dayo kala duwan oo Lumbini loogu beddelayo “Mecca of Buddhists”, haddana aagga waa la dayacay waxayna u baahan tahay balaayiin doollar oo maalgashi ah.
Khubaro badan ayaa aaminsan in daahfurka laga yaabo inuu xaliyo muranka ku saabsan taariikhda dhalashada Siddhartha Gautama, oo noqday Buudada.
Maanta Lumbini waxay martigelisaa macbudyo iyo macbudyo badan oo ay dhiseen dhowr iyo toban dal oo kala duwan. Waxaa xusid mudan dhexdooda waxaa ka mid ah Royal Buddhist Monastery, Zhong Hua Chinese Buddhist Monastery. Cambodia Monastery, Pagoda Peace World, iyo dabcan dahabka taajka, Macbadka Maya Devi. Way fududahay in laga gudbo boulevard -ka dheer oo la booqdo dhammaantood. Waxaa sidoo kale jira madxaf ku yaal goobta kumanaan alaab ah oo laga soo saaray gudaha iyo hareeraha goobta Macbadka Maya Devi.
Waxaa ku hareereysan taariikhda iyo muhiimadda diimeed ee Lumbini waxay noqon kartaa waayo-aragnimo dhab ah oo harraad-dhimis xagga ruuxa ah sidaa darteed hubso inaad naftaada u oggolaato waqti ku filan oo aad ku oggolaato.
Lumbinī waa Buddhist goobta xajka ee Degmada Rupandehi ee Gobolka Lumbini ee Nepal. Waa meeshii, sida dhaqanka Budhiistaha, Boqoradda Mahamayadevi ku dhashay Siddhartha Gautama qiyaastii 563 BCE
Sida loo tago Lumbini?
Diyaarad ahaan u raac 30 daqiiqo oo duulimaad ah Siddharthanagar iyo 28 km u wad halkaas.
Bas. 10-11 saacadood ayaa cuntada lagu joojiyaa jidka
Baabuurka gaarka loo leeyahay 7-8 saacadood
Qaadashada waddada Hetauda waxay bixisaa ikhtiyaarka booqashada Kaydka Duur -joogta Barsa, Chitwan, ama labadaba marka la safrayo Pokhara waxay fursad u siineysaa inay ku sii hakadaan Bandipur magaalada buuraleyda ah ee quruxda badan ee ku taal dhaqanka Newar, ka dibna Pokhara si ay u booqato Phewa Harada, eeg baaxadda Annapurna. Haddii aad haysato waqti oo aad rabto inaad aragto tirada ugu badan ee muuqaalka dhulka iyo muuqaalka Nepal, kirayso baabuur khaas ah oo samee safar wareeg ah oo dhammaan ku hel hal safar.
Mar Lumbini waxaa ku yaal hoteello aad u fiican oo bixiya qiimayaal iyo adeegyo aad u kala duwan. Waxaa lagugula talinayaa inaad hore u sii ballansato mid kasta iyo dhammaan meelaha loogu talagalay safarkaaga.
Nepal waxaa loo dallacsiiyay sidii Isha Budhiismka.
Qoraaga/sawir -qaadaha ayaa safar “loop” ah ku qaaday gaadhi khaas ah sannadkii 2015kii.